4 Anaka, ianareo dia avy amin’ Andriamanitra ary efa naharesy ireny, satria lehibe Izay ao aminareo noho izay ao amin’ izao tontolo izao.5 Isan’ izao tontolo izao ireny, ka dia miteny araka ny an’ izao tontolo izao izy, ary mihaino azy izao tontolo izao.6 Avy amin’ Andriamanitra izahay; izay mahalala an’ Andriamanitra no mihaino anay; Izay tsy avy amin’ Andriamanitra tsy mba mihaino anay. Izany no ahafantarantsika ny fanahin’ ny fahamarinana sy ny fanahin’ ny fampiviliana.
1 JAONA 4 :4-6
NY OLONA MAHAY MANAVAKA NY FAMPIANARANA
Mampitandrina ny mpino manoloana ny fisian’ny fampianaran-diso i Jaona . Fantaro izay ireo mampianatra ?
1-Manana ny Fanahy Masina
Mananatra ny kristiana i Jaona mba tsy hinohino foana ny fanahy rehetra. Miankina amin’ny fanahy miasa ao anatin’ny olona ny fampianarana ambarany. I satana dia miezaka mandrakariva ampirenireneny ny olon’ Andriamanitra. Kanefa rehefa manaiky tarihin’ny Fanahy masina dia mahay manavaka ny fampianarana marina amin’ny fampianaran-diso ny mpino. Tsarovy fa miaina eto anivon’izao tontolo izao isika, maro ireo karazam-pampianarana miseho ankehitriny. Meteza hotarihan’ny Fanahy Masina ianao dia hiorina tsara amin’ny finoana, hitoetra amin’ny famonjena efa notanterahin’i Kristy.
2-Tena olon’ Andriamanitra
Ambaran’i Jaona eto fa iraka avy amin’ Andriamanitra izy. Iraka maneho ny fahamarinana araka an’ Andriamanitra. Ny tena olon’ Andriamanitra miombom-piainana amin’ Andriamanitra « mahalala an’ Andriamanitra » mahay mihaino, mahay mandray ny fampianarana entiny. Izao tontolo izao ihany no afaka mifampihaino, mifampizara fampianarana. Ampitandremana fatratra noho izany ny mpino tsy handray ny fampianarana mifanohitra amin’ny finoana marina mahakasika an’i Jesoa Kristy , Ilay Andriamanitra tonga nofo namonjy ny olona rehetra .
Nahoana no misy olona efa nandroso tamin’ny fanompoana kanefa nihemotra noho ny fandraisana fampianarana hafa?